महन्थ ठाकुरसँग श्यामशरणको ‘गोप्य’ भेटपछि जनता समाजवादी पार्टी नयाँ नक्साको विपक्षमा – Nepal Insider
आफन्तले सातापछि बुझे बझाङकी सम्झनाको लाशसँगै १० लाख रुपैया राहत
नेपालकै पहिलो विद्युतीय बसले आजबाट धुलिखेल–काठमाडौँ सेवा दिने
Breaking…काठमाडौंमा ग्यास ‘लिक’ भएर आ’गो लाग्दा पाँच जना घा’इते
ज्ञानेन्द्रको यातायात कार्यालयमा छड्के, हाकिमको सातो लिए, घुस खाने अखडा भन्दै थर्काए (हेर्नुहोस भिडियो)
निषेधाज्ञा सम्वन्धी प्रशासनको फेरि आयो यस्तो निर्णय !
कुलमानको पुर्ननियुक्ति प्रस्ताव मन्त्री पुनले नगरेको खुलासा, क्रेडिट एक्लै लिएको रिस
मुख्य पृष्ठ /समाचार/महन्थ ठाकुरसँग श्यामशरणको ‘गोप्य’ भेटपछि जनता समाजवादी पार्टी नयाँ नक्साको विपक्षमा
महन्थ ठाकुरसँग श्यामशरणको ‘गोप्य’ भेटपछि जनता समाजवादी पार्टी नयाँ नक्साको विपक्षमा
काठमाडौं । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत एवं पूर्वभारतीय विदेश सचिव श्यामशरण काठमाडौं आएको विषयले मंगलबार दिनभर नेपालको राजनीति तरंगित बन्यो । सत्तारुढ नेकपा निकटबाटै श्यामशरण काठमाडौंको मेरियट होटलमा बसेको सूचना चुहिएपछि उनले क–कसलाई भेटे भन्ने विषयप्रति धेरैको चासो छ ।
यस्तो कडा लकडाउनका बेला पनि श्यामशरण कसरी काठमाडौं आउन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि धेरै उठे । भारतीय दूतावासकै कर्मचारी श्यामशरण काठमाडौंमा आएको भन्ने विषयमा अनभिज्ञ थिए । स्रोतका अनु्सार भारतले नेपालबाट चार दिनअघि १६४ जना आफ्ना नागरिक लैजान विमान काठमाडौं पठाएको थियो । सोही विमानमा श्यामशरण आएको बताइन्छ । काठमाडौं आइपुगेका श्यामशरण होटल मेरियटमा बसेको र जनता समाजवादी पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई भेटेका थिए । उनी मंगलबार अपराह्न ५ बजेर ४५ मिनेटमा मुम्बई उडेको विमानबाट भारत फर्केको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार श्यामशरणले नयाँ नक्साको पक्षमा संविधान संशोधनमा मतदान नगर्न महन्थलाई सुझाएका थिए । श्यामशरणमार्फत भारतको त्यस्तो चाहना रहेको बुझेपछि ठाकुरले ठोस जवाफ नदिएको उनी निकट जनता समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ नक्साको बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । उच्च स्रोतका अनुसार जसपाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईकै दबाबका कारण पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याएको हो ।
बाबुरामको चलखेलपछि जसपाका नेता राजेन्द्र महतो पनि अन्योलमा परेका छन् । तत्कालीन एमाले तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निगाहमा महतो सांसद निर्वाचित हुन सफल भएका थिए । उनको ओलीसँग हार्दिक सम्बन्ध छ । तर, नयाँ नक्साको विषयले सम्बन्ध बिग्रिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । ‘हामी नयाँ नक्साकै पक्षमा उभिनु पर्छ, नत्र बर्बाद हुन्छ । बाबुरामजी मानिरहनु भएको छैन,’ महतोको भनाइ उद्धृत गर्दै जसपाका एक नेताले भने ।
नयाँ नक्सा र संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न भन्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गर्ने जानकारी दिए ।
जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई प्याकेजमै सहमति गरी सर्वसम्मत संविधान संशोधन हुनुपर्ने विचार राखेका थिए । त्यसमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सहमति जनाएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र भएको र भारत विरोधी देखाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालमा फेरी एक जना कोरोना संक्रमितको नि’धन
सडकमा सीम बेच्ने युवा एकाएक ४० अर्बका मालिक, नेपालबाट यसरी कमाउछन्, पैसा थाहा पाउदा सबै चकित !
मास्क किन्दा मात्रै तीन करोड घोटाला, सबै लुटेरा भएपछि कसरी बन्छ देश ?
नुवाकोटकी एक युवतीलाई कोरोनाको आशंकामा अस्पताल पठाइयो
नेपालमा को’रोनाको नयाँ र खतरनाक लक्षण देखिएको भन्दै डब्लुएचओले दियो ड’रला’ग्दो चे’तावनी!